चीनको अद्भूत प्रविधि, बेइजिङबाट मात्र एक घण्टामै अमेरिकासम्म पुग्न सक्ने ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com चीनको अद्भूत प्रविधि, बेइजिङबाट मात्र एक घण्टामै अमेरिकासम्म पुग्न सक्ने ! - खबर प्रवाह
चीनको अद्भूत प्रविधि, बेइजिङबाट मात्र एक घण्टामै अमेरिकासम्म पुग्न सक्ने !
एक चिनियाँ कम्पनीले यस्तो हाइपरसोनिक विमानको योजना पेश गरेको छ जो बेइजिङबाट केवल ६० मिनेटमा न्यूयोर्क पुग्न सक्छ । यो विमान १ घण्टामा ११ हजार २६५ किलोमिटरको दूरी पार गर्न सक्छ । यसलाई ‘रकेट पिथ विंग्स’ पनि भनिएको छ ।
स्पेस डटकमको रिपोर्टअनुसार कम्पनीले एक भिडियो जारी गरेको छ जसमा विमानले आफ्ना पखेटा डिट्याच गरेको देखिएको छ । यो विमान रकेटको माध्यमले उड्नेछ । स्पेस ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीको दावीअनुसार हाइपरसोनिक विमानबाट चीनको राजधानी बेइजिङ र अमेरिकाको न्यूयोर्कबीचको दूरी केवल एक घण्टाको हुनेछ ।
चीनको हाइटेक योजनामा पहिलेदेखि नै हाइपरसोनिक विमान बनाउने लक्ष्य छ । चीनले हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाउनको लागि ठूलो पैसा खर्च गरिरहेको छ । गत वर्ष चीनले यस्तो एयरक्राफ्टको योजना पेश गरेको थियो जसमा १० जना बसेर १ घण्टामा पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँमा जान सक्छन् ।
चीनले ९ हजार ६५६ किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिको परमाणु मिसाइल इन्जिन पनि तयार गरिरहेको छ । रिपोर्टका अनुसार यो त्यही डिजाइनमा आधारित छ जसमा पहिले नासाले पनि काम गरिरहेको थियो तर धेरै लागतका कारण नासाले योजना रद्द गरेको थियो । डिसी नेपालबाट
२० भन्दा बढी मजदुर नेताद्धारा एमाले परित्याग, एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश